Factor V Leiden (ဖက်တာဖိုက်လီဒန်) - Hello Sayarwon
Factor V Leiden (ဖက်တာဖိုက်လီဒန်)
Dr. Hlaing Min Ko Ko မှ ရေးသားသည်။ 19/02/2018 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Factor v leiden (ဖက်တာ ဖိုက် လီဒန်) ကဘာလဲ။
Factor V Leiden သည် Factor V ဟုခေါ်သော သွေးခဲပစ္စည်းဗီဇပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုဗီဇပြောင်းခြင်းသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော သွေးခဲများ အထူးသဖြင့် သွေးပြန်ကြောများထဲတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ချေကိုမြင့်မားစေပါသည်။
Factor V Leiden ရှိသော လူအများစုတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော သွေးခဲများ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိ၏။ သို့သော် တစ်ချို့တစ်ချို့တွင်သာ သွေးခဲခြင်းမှ နာတာရှည်ပြဿနာများ သို့မဟုတ် အသက်အန္တရာယ် ရှိလာခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Factor v leiden (ဖက်တာ ဖိုက် လီဒန်) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Factor V Leiden မှ Thrombophilia တွင် အဖြစ်အများဆုံး မွေးရာပါရောဂါမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ဥရောပအနွယ်များတွင် ၃ – ၈ % လောက်ထိက Factor V Leiden ဗီဇပြောင်းခြင်းကို ဆဲလ်တစ်ခုစီအတွင်းထိ သယ်ဆောင်ထားလျက်ရှိပြီး လူ အယောက် ၅၀၀၀ တွင် တစ်ယောက်နှုန်း ထိုဗီဇပြောင်းမှု ပုံပွား ၂ မျိုးကို လက်ခံထားရပါသည်။ တခြားမျိုးနွယ်များတွင်တော့ ထိုဗီဇပြောင်းမှုမှာ အဖြစ်နည်း၏။ အမျိုးသမီးများမှာ ကိယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် သားဆက်ခြား ဟော်မုန်းဆေးသောက်စဉ် သွေးခဲဖြစ်ပေါ်နိုင်ချေ ပိုမြင့်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Factor v leiden (ဖက်တာ ဖိုက် လီဒန်) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Factor V Leiden ၏ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာများမှာ
ခြေသွေးပြန်ကြောကြီးများတွင် သွေးခဲခြင်း (DVT) သို့မဟုတ် အဆုတ်တွင်းသွေးခဲစို့ခြင်း (PE) အား အသက် ၅၀ မတိုင်မှီ စောဖြစ်ထားလျှင်
DVT သို့မဟုတ် PE ခဏခဏဖြစ်ခြင်း
ဦးနှောက် နှင့်အသည်းလို ပုံမှန်ဖြစ်လေ့မရှိသည့် နေရာများတွင် သွေးခဲခြင်း
ကိုယ်ဝန် ဒုတိယနှင့် တတိယသုံးလပတ်အတွင်း အကြောင်းပြချက်မရှိ သားလျှောဖူးလျှင်
မိသားစုတွင် DVT နှင့် PE ရှိဖူးလျှင်
Factor v leiden (ဖက်တာ ဖိုက် လီဒန်) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သွေးခဲဆိုသည်မှာ သွေးလွှတ်ကြော သို့ သွေးပြန်ကြော ထိခိုက်မိသည့်အခါ သွေးမထွက်ရန်အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်သည်။ သွေးခဲခြင်းသည် သွေးမွှားဥများနှင့် သွေးထဲမှသွေးခဲပရိုတင်းများ ဓါတ်ပြုရာမှဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သွေးခဲဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများက သွေးခဲအများကြီး မဖြစ်သွားစေရန် ကာကွယ်ပေး၏။
ပုံမှန်အားဖြင့် Factor V မှာ သွေးခဲပရိုတင်းဖြစ်သည်။ သွေးခဲရန် မလိုအပ်တော့သည့်အခါ သွေးခဲဆန့်ကျင်ပရိုတင်းများက Factor V ကို ဖြိုခွဲပေးသည်။
Factor V Leiden ကတော့ သွေးခဲဆန့်ကျင့်ပရိုတင်းများ Factor V ကို ဖြိုရခက်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည်။ ထိုသို့ဖြင့် သွေးထဲတွင် Factor V များ များပြားလားပြီး သွေးခဲနိုင်ချေ ပိုမြင့်လာပါသည်။
Factor V Leiden ဖြစ်နေလျှင် ပြောင်းလဲနေသော ဗီဇပစ္စည်း၌ ပုံပွားတစ်ခု (heterozygous) သို့မဟုတ် ရှားပါစွာဖြင့် ပုံပွားနှစ်ခု (homozygous) ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။ ပုံပွားတစ်မျိုးတည်းဆိုပါက သွေးခဲနိုင်ချေ ပိုနည်းပါသည်။ မိဘနှစ်ပါးဆီမှာ တစ်ဖက်စီပါလာသော ပုံပွား ၂ မျိုး ခံယူရသူဆိုပါက သွေးခဲနိုင်ချေ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာမည်ဖြစ်သည်။
Factor v leiden (ဖက်တာ ဖိုက် လီဒန်) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Factor V Leiden ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
Factor V Leiden မိသားစုမျိုးရိုးရှိခြင်း
အိန္ဒိယဥရောပမျိုးနွယ် သို့မဟုတ် ဥရောပအနွယ်
Factor v leiden (ဖက်တာ ဖိုက် လီဒန်) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
မိသားစုအတွင်း သွေးခဲရောဂါမျိုးရိုးရှိလျှင် သို့မဟုတ် သင့်၌ ဖြစ်ဖူးလျှင် သင့်ကို Thrombophilia ရှိကြောင်း ဆရာဝန်မှ သံသယရှိပါလိမ့်မည်။ အတည်ပြုခြင်းကိုတော့ Screening test တစ်ခုဖြစ်သော coagulation screening test သို့မဟုတ် F5 gene ဗီဇစစ်ခြင်း (DNA စစ်ခြင်း) ဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။
Factor v leiden (ဖက်တာ ဖိုက် လီဒန်) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဆရာဝန်များသည် Warfarin (Coumadin, Jantoven) , heparin သို့မဟုတ် မော်လီကျူး အလေးချိန်နည်းသော heparin တို့လို သွေးကျဲဆေးများနှင့် သွေးခဲသူများကို ကုသကြပါသည်။
အကယ်၍ factor V Leiden ဖြစ်ကြောင့် အတည်ပြုပြီးသော်လည်း သွေးခဲမှုမဖြစ်သေးလျှင် ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ သွေးကျဲဆေးများကို ဆရာဝန်မှ သောက်ခိုင်းမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ခွဲစိတ်ရန် သို့မဟုတ် ဆေးရုံတက်ရန်လိုသည့်အချိန်များကဲ့သို့ အန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်သည့်အချိန်တွင် သွေးကျဲဆေးများကို သောက်ရနိုင်ပါသည်။
သင့်၌သွေးခဲရှိနေပါက ကနဦးအစ စံပြုကုထုံးများတွင် heparin နှင့် warfarin ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပါသည်။ ဆရာဝန်သည် ကနဦးကုထုံးပြီးနောက် heparin ကို ရပ်ခိုင်းပြီး warfarin ကိုသာ ဆက်သောက်ခိုင်းပါလိမ့်မည်။ ဆေးသောက်ရမည် ကြာချိန်ကိုတော့ သင့်သွေးခဲအခြေအနေပေါ် မူတည်ပါသည်။
Hepari – အဆိုပါ သွေးကျဲဆေး၏အာနိသင် သက်ရောက်မှုမှာ Warfarin ထက်ပိုမြန်၏။ သွေးကြောထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထိုးခြင်း သို့မဟုတ် အရေပြားအောက်ထိုးခြင်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ တစ်ချို့သော heparin ပုံစံ ဥပမာ enoxaparin (Lovenox) နှင့် dalteparin (Fragmin) တို့ကို ကိုယ်တိုင်းထိုးနိုင်ပါသည်။ Heparin ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဖြစ်လာနိုင်သည့် Heparin အန္တရာယ်များမှာ သွေးယိုခြင်းနှင့် အလက်ဂျီတို့ဖြစ်သည်။ Heparin တွင် စံပြဆေးပမာဏဟူ၍မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် သွေးပုံမှန်စစ်ခြင်းဖြင့် မှန်ကန်သည့်ဆေးပမာဏကို ချိန်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
Warfarin (Coumadin, Jantoven) – ဤဆေးများမှာ ဆေးလုံးပုံစံဖြင့်လာပြီး heparin ထက်သုံးပိုလွယ်၏။ Warfarin သည် သန္ဓေသားတွင် ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ယွင်းမှုဖြစ်စေသောကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် မသုံးသင့်ပါ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန် ပထမ ၃ လတွင်အဖြစ်များ၏။ သွေးထွက်ခြင်းမှာ warfarin ၏ အဓိကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်။
ဤဆေးသည် တခြားသောဆေးများ အပင်ထွက်ပရဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘာဆေးမဆိုသောက်မည်ဆိုပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ရန် လိုအပ်ပါမည်။ Heparin ကဲ့သို့ပင် သူ့တွင်လည်း စံပြဆေးပမာဏဆိုပြီးမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် သွေးစစ်ခြင်းဖြင့် ဆေးပမာဏချိန်ရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
တစ်ချို့သူများတွင် သွေးခဲခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ဆေးအသစ်သုံးမျိုးအား FDA မှ ခွင့်ပြုထားပါပြီ။ သူတို့တွင် သွေးစစ်ခြင်း ဆေးပမာဏချိန်ရခြင်းမျိုး မလိုတော့ပါ။ ထိုဆေးများ၏ အဆိုးဝါးဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှာ သွေးယိုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ထိုဆေးများနှင့် warfarin ယှဉ်ပါက အန္တရာယ်ပိုနည်းကြောင်း တွေ့ရှိထားပါသည်။
ထိုဆေးများကြောင့် သွေးအများအပြားယိုခြင်းကို အလွယ်တကူကုသမရနိုင်ပါ။ တစ်ဖက်တွင် Warfarin Heparin ကြောင့်ဖြစ်သော သွေးယိုခြင်းကတော့ မြန်မြန်ကုသနိုင်ပါသည်။
ထိုဆေးအသစ်များကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင်လည်း သေချာမလေ့လာရသေးပါ။ တခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်သော်လည်း Warfarin နှင့်ယှဉ်လျှင် အစာ ဆေး ဓါတ်ပြုမှု ပိုနည်းနေပြန်ပါသည်။
သွေးကျဲဆေးအသစ်များကို သုံးမည်ဆိုပါက Warfarin နှင့်ယှဉ်ပြီး ဖြစ်နိုင်သည့် အန္တာရယ် အကျိုးကျေးဇူးတို့ကို ဆရာဝန်နှင့် သေချာဆွေးနွေးပါ။
သွေးယိုနိုင်သည့်အန္တရာယ် မြင့်မားသောသွေးကျဲဆေးများသောက်နေရလျှင် ဆရာဝန်မှာ နောက်ပြန်ပြရန်ရက်ချိန်းကို နီးနီးလေးချိန်းပါလိမ့်မည်။ ထိခိုက် ပြတ်ရှနာဖြစ်လျှင် သွေးခဲဖို့ လုံလောက်မှုရှိမရှိသိနိုင်ရန် ဆရာဝန်က သွေးစစ်မှုများကို ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မည်။
Factor V Leiden နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်
Factor V Leiden ရှိသော အမျိုးသမီးအများစုမှာ ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တွင် သွေးခဲဖြစ်ပေါ်ရန်မှာ အလွန်ဖြစ်နိုင်ချေများသည်။ Factor V Leiden ရှိသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်များမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဆေးပညာနှင့်ကြီးကြပ်မှုကို လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် မွေးဖွားစဉ်တွင် သွေးကျဲဆေးများကို သောက်ပါက အန္တရာယ်ထက် ကာကွယ်မှုပိုကောင်းသည်ဆိုသောအချက်အတွက် တိကျသေချာသော သက်သေမရှိပါ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Factor V Leiden ကိုကုသသည့်နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
မနားပဲ ကားစီးလေယာဉ်စီးခြင်း – ခြေထောက်များကို အချိန်တစ်ခုကြာသည် အထိ (၂ နာရီထက်ပိုခြင်း)ထားပါက သွေးလှည့်ပတ်မှုကိုအကူအညီပေးသည့် ခြေသလုံးကြွက်သားများကို ငြိမ်နေစေပါလိမ့်မည်။ ဖြစ်နိုင်ပါက လေယာဉ်တစ်လျှောက် ခဏတာ ထလျှောက်ပေးခြင်းမျိုးလုပ်ပါ။
ရေဓါတ်ဖြည့်ရန် ရေကိုပိုသောက်ပါ။ အရက်ရှောင်ပါ။
ကားစီးလျှင် ခဏခဏရပ်ပြီး လမ်းလျှောက်ပေးပါ။ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါစေ အကြာကြီးထိုင်ရမည်ဆိုပါက ခဏတာထပေးခြင်း ခြေလက်ဆန့်ခြင်းမျိုး လုပ်ပေးပါ။
နာတာရှည်ဖျားခြင်းသို့မဟုတ် လေဖြတ်ခြင်းကြောင့် အချိန်အကြာကြီး အိပ်ယာတွင် လှဲနေရခြင်း – ခြေထောက်ရှိသွေးကြောများ ရွေ့လျားစေရန် ဆရာဝန်မှ compression stockings ဝတ်ရန် လမ်းညွှန်ပါလိမ့်မည်။
ထိခိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ခြင်း – သွေးပြန်ကြောများကို ခိုက်မိခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ခြင်းက သွေးစီးဆင်းမှုကို နှေးကွေးစေပြီး သွေးခဲနှုန်းကို မြင့်စေပါသည်။ ခွဲစိတ်စဉ်သုံး၇သော မေ့ဆေးများကလည်း သွေးပြန်ကြောများကို ကျယ်သွားစေပြီး သွေးအိုင်မှုကိုပိုဖြစ်စေကာ သွေးပိုခဲစေပါသည်။ သင့်တွင် factor V Leiden ရှိကြောင်း ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
OC pill သို့မဟုတ် မဟော်မုန်းဆေးများ – ထိုဆေးများကိုယ်တိုင်က သွေးခဲမှုကို မြင့်စေသောကြောင့် သင့်တွင် factor V Leiden ရှိပါက အန္တရာယ်နှင့် အကျိုးကျေးဇူးကို ချိန်ဆနိုင်ရန် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း – ဆေးလိပ်သည် သွေးလှည့်ပတ်မှုနှင့် သွေးခဲခြင်းကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ဆေးလိပ်သောက်သူဆိုပါက ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။
factor V Leiden ရှိနေပါက သွေးလှူခြင်းကိုရှောင်ရန်မလိုပါ။ factor V Leiden လူနာများမှာ စိတ်ဝင်စားပါက သွေးလှူနိုင်ပါသည်။
သွေးကျဲဆေးများကိုသောက်နေရပါက ထိုဆေးများ သွေးထဲမှ အကုန်အစင်ကုန်သွားပြီးနောက်မှ လှူပါ။ ဆေးသောက်နေရပါက သွေးမလှူခင် ဆရာဝန်နှင့်ပြခြင်းမှာ အကောင်းဆုံးပင်။
factor V Leiden ကြောင့် သွေးကျဲဆေးများ သောက်ရမည်ဆိုပါက အောက်ပါတို့ကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့် ထိခိုက်မှုနည်းစေပြီး သွေးအများအပြားယိုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ထိတွေ့မှုများသည့် အားကစားများ သို့မဟုတ် တခြားသော ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေမည့် လှုပ်ရှားမှုများကိုရှောင်ပါ။ ထိတွေ့မှုသိပ်မရှိသည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ ဥပမာ လမ်းလျှောက်ခြင်း ရေကူးခြင်းများကိုတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် လုပ်နိုင်ပါသည်။
ပျော့ပြောင်းသော သွားတိုက်တံ၊ ဖယောင်းသွားခြစ်ကြိုးများကိုသုံးပါ။
ဓါး၊ ကတ်ကြေးနှင့် တခြားချွန်ထက်သည့်အရာများ သုံးမည်ဆိုလျှင် သတိထားပါ။
Factor V Leiden. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/factor-v-leiden/basics/definition/con-20032637. Accessed August 25, 2017.
Factor V Leiden thrombophilia. https://ghr.nlm.nih.gov/condition/factor-v-leiden-thrombophilia#diagnosis. Accessed August 25, 2017.
Learning About Factor V Leiden Thrombophilia. https://www.genome.gov/15015167/learning-about-factor-v-leiden-thrombophilia/. Accessed August 25, 2017.
ဓာတ်ဆားမမျှတမှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေ သိထားဖို့ လိုမလဲ
သင့်လက်တွေက ပြောပြနေတဲ့ ကျန်းမာရေး လျှို့ဝှက်ချက်များ